Icala elimnyama loluntu lwangoku njengoko kubonwe nguMorski | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iminyaka emibini edlule, UPawel Kuckzynsk wasizisela amehlo akhe akhethekileyo kuthotho lwemizekelo ethi bajonge enye indlela zempembelelo zezinto ezithile kolu luntu lwanamhlanje ezinje ngezonxibelelwano. UWaldo leeNgakolunye uhlangothi, kulo mfanekiso ufuna ukusinika enye indlela yokujonga oko kuthethwa nguFacebook kunye nala makhulu emifanekiso enza ukubonakala kwethu kule nethiwekhi.
Ngamafutshane, indlela yokubonisa okwenzekayo kule nkqubo nakuluntu apho ngamanye amaxesha izinto zihamba ngokukhawuleza, oko asikwazi ukuzinika ikhefu ukuma ndicinge ngako. Umzobi wasePoland uyekile ukucinga ngezinto ezithile kwaye ubonakalisa kolu luhlu lwemifanekiso ye-surreal enomyalezo ofihliweyo kubo, nangona loo ntsingiselo ibonakala icacile.
U-Igor Morski waphumelela kwi-Faculty yangaphakathi kunye noyilo lwezoShishino lweSikolo esiPhakamileyo soBugcisa ePoznan, kwaye isebenza ukusukela ngee-80 kunye nee-90's ngaphambi kokugqibela ukuwela kumzekeliso kumajelo eendaba. Kwakukho ngo-1995 xa wavula i-studio yakhe.
UMorski ucacisa ukuba ixesha alichithe esebenza kwimagazini yaseWprost Iinjongo zakhe zamkhokelela kwisitayile se-surreal. Yena ngokwakhe uyavuma ukuba wenza umsebenzi apho imizekeliso yakhe emininzi yayithathwa ngokoqobo, ngokungathi okuboniswe kuyo kuyinyani. Babeziziifoto zemontage kunye nabapolitiki.
Imifanekiso nganye esabelana ngayo wenza inyani encinci esijongana nayo mihla le kwaye ngamanye amaxesha kunzima ukuphuma kuyo. Umzekelo ocacileyo ngowokuba ii-smartphones xa wonke umntu esihla ngesitrato njengee-zombies kunye nezixhobo ezibotshelelwe esandleni sakhe zijongwe ngamehlo.
Unayo iwebhusayithi yakho y facebook wakho ukufumana umsebenzi wakhe oseleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imizekelo ephikisanayo kwicala elimnyama loluntu lwale mihla